SAROKAR: मैलाकी रानी कालेबुङ?
मैलाकी रानी कालेबुङ?
कालेबुङ 23 फरवरी।
हरिजन रोड हिड्‌नु परे नाक बन्द गर्नैपर्छ। हाटबजार जॉंदा त्यस्तै छ।
आरसी मिन्ती रोड गए त्यस्तै हो। 10 माइल फाटकको झनै के भन्नु, नगरको प्रायः जम्मै ठाउँमा मैला। धन्न मेनरोडमा भने नगरपालिकाले डस्टबिन राखेर अलि राम्ररी स्वास लिनसक्ने बनाइदिएको छ। नगरमा जतै जतै मैला थुप्रिँदा नगरपालिकालाई दोष दिने जनसाधरणलाई के थाहा विचरा नगपालिकाको नयॉं वोर्ड नै डम्पिङको समस्याले ग्रस्त छ।
नगरपालिकाकोे नगरलाई स्वच्छ पार्ने दिशाको पहल तीब्र छ तर परिणाम भने शुन्य। नाक बन्द गरेर हिँड्‌नुपर्ने कालेबुङमा पर्यटक भित्राउने सपना देख्नेहरू पनि धेरै छन्‌। सडक किनारमा कैयौं दिनदेखि थुप्रिने मैला अनि हेर्नपनि नसक्ने अवस्थाको नालीहरूको दुर्गन्ध ह्वास्सै नाकमा आउँदा एकपल्ट कालेबुङ आउने पर्यटकहरू फेरि-फेरि कालेबुङ पक्कै पनि आउँदैनन्‌। तर अचम्मको कुरा मानौं कालेबुङवासीलाई भने मैलामा बस्ने आदत नै बनिसकेको छ। एउटा खोल्सामा अनेकिसिमको मैला, त्यसैको नजिकको धाराबाट पानी थाप्नुपर्ने बाध्यता। पचाइरहेका छन्‌ कालेबुङबासीले। समयको परिवर्तन अनि विश्वको विकासक्रमको हाराहारीसितै गतिशिल रूपमा कुनै पनि क्षेत्र विकसित अथवा स्वच्छ वा हेर्नलायकको बन्दैजान्छ। तर कालेबुङ त्यसको ठीक विपरित। समयसितै दिनोदिन कुरूप बन्दैछ।
ब्रिटिसकालीन समयदेखि मैला फ्यॉंक्न थालिएको भालुखोपमा जनसंख्याको वृद्धिसितै क्षेत्रमा बढेको आवादीको कारण मैला फ्यॉंक्न नसक्ने स्थिति आइपर्‍यो। त्यसपछि4वर्षदेखि नगरमा थुप्रने मैला व्यवस्थित ढङ्गमा फ्यॉंक्ने आजसम्म व्यवस्था छैन। नगरपालिकाको नयॉं वोर्डको निम्ति सबैभन्दा अघि उभिएको चुनौति हो डम्पिङ ग्राउण्ड। भालुखोप दलमानगाउँस्थित निर्माणाधिन डम्पिङ ग्राण्डको निम्ति नयॉं वोर्ड आउनअघि कुनै ठोस्‌ राशि अनुमोदन नभइकन काम थालेको अनि पैह्रोग्रस्त क्षेत्र पनि भएकोले नगरपालिकोको नयॉं वोर्डले दलमान गाउँको डम्पिङ ग्राउण्डलाई ‘क्यान्सल’ गरिसकेको छ। नगरपालिका अहिले नयॉं डम्पिङ ग्राउण्डको लागि जमिन खोज्न व्यस्त छ।
टिस्टामा सँधै मैला फ्यॉंकिरहँदा उत्पन्न हुनक्ने सममस्या झेल्न नचाहने नगरपालिकाको निम्ति नगरको मैलाले उल्टा नगरपालिकालाई नै हैजा फैलाउने स्पष्ट छ। नगरको हरेक कुनाको मैला क्षेत्रबासीहरू हुँदै नगरपालिकामा आएर ठोक्किँदा भविष्यमा नगरपालिकाको नयॉं वोर्ड निक्कै गतिलो रोगले ग्रस्त हुने देखिएको छ। पानी बग्ने नालीमा बगेको पाइपको बिट्टा, जताततै टालेको फेस्टुन, झ्यारलाङझुर्लुङ भएका तारहरू, नोटिस पाएर पनि भत्कन नसकेका चारपुस्ताअघिका बिल्डिङहरू, नोटिस पाएर पनि अग्लिँदै गरेको आलिसान भवनहरू आदिले कालेबुङ नगरको प्राकृतिक सौन्दर्यता आजभोलि हराइसकेको छ।
0 comments: on "मैलाकी रानी कालेबुङ?"